नेपाली यौन कथा अनलाईन : १३ बर्से सुनिता संग चिक्दा
१३ बर्से सुनिता संग चिक्दा
हुन त यस्तो पाप गर्न नहुने तर पनि यो पापी मन किन किन पाप सोचिरहनछ. मलाई बुढी या अलि उमेर भएका केटि या आइमाई पट्ट्क्कै मन पर्दैन . १२-१५ वर्ष का कलिला वोठ निचार्दै मा पनि दुध निक्लेला जस्ता गुध पनि स्स्नो बल जस्ता भएका केटिहरु मात्रै मन पर्न थालेको छ त्यसैको खोजीमा मा मैले सुनिता लाई भेटेको थिय. बडो कठिना ले सेटिङ्ग गरेर आज सुनिता संग चल्दी थिए.
केटीका भरखर उठेका दूधका मुन्टा टीसर्टबाट प्रस्ट देखिइरहेको थियो ।
सुनिता फेरि मसँग चल्न थालिन । चल्दाचल्दै दुबै हात च्याप्प समातेर “कति चल्छौ हँ स्वास्नी बनाउँछु अनि” भने ।
“जान्छु होलायस्तैसँग” भन्दै मेरो हातमा दुख्ने गरी चिमोटेर उनी बेड भएतिर भागिन । म मूडमा थिएँ । उसैका लागि भनेर ठूलो खालको क्याटबरी ल्याइदिएको थिएँ ।
“यी लेउ क्याटबरी” पकेटबाट क्याटबरी झिक्दै मैले उनलाई आफूतिर आकर्षित गरे । १४ वर्षकी किशोरी चक्लेट भनेपछि आकर्षित भइ हाली । ूक्याटबरी खाने भए त मेरो काखमा बस्नु पर्छ निू मेरो प्रस्ताव थियो ।
“हस” भन्दै ऊ आई । मैले उसलाई क्याटवरी थमाएर आफ्नो काखमा राखें ।
उ क्याटवरीको र्यापर खोलेर अलिअलि गर्दै खान थाली । म भने उसको भरखर उमि्रएका दूधमा हात पुर्याएर पञ्जाले विस्तारै थिच्न थालें । दुई चार पटक विस्तारो विस्तारो थिच्दा उसले कुनै प्रतिक्रिया नजाएपछि मेरो हौसला बढ्यो र दूध मोल्ने क्रम बढाएँ । मेरो लाडो उत्तेजित हुन थाल्यो ।
यी सब कुराबाट अनभिज्ञजस्तो हुँदै ऊ भने क्याटबरी खाइरहेकी थिई । “मलाई चाँहि क्याटवरी नदिने” दूध माड्दै मैलै भने । “यी लिनुन त”क्याटवरीको एक टुक्रा भाँचेर दिदैं उसले भनी ।
“म त तिम्रो मुखभित्रबाट खाने”मेरो भनाई सुनेर ऊ हाँसी ।
“छ्या जुठो पनि खान्छन त” उसको भनाई थियो ।
“खाइहाल्छु नि ल मुखमा राख मात्रै} मैले भनें । उसले दाँतले टोकेर मतिर मुख दिई । मलाई क्याटबरी खानु त के थियो र । उसको कलिलो ओठ चुस्नु थियो ।
कलिला ओठ त्यसमाथि क्याटबरीको गुलियो लागेको । मेरो उत्तेजना चरम बिन्दूमा पुग्यो । यतिखेरसम्म उसलाई काखमा राखेर उसको हिपमा मेरो लाडोलाई दलिरहेको थिएँ ।
“सुनिता अब छिराउँ है” उत्तेजनाले चरम सीमा नाघेकाले मैले भने । भनिन्छ केटीहरुमा १२ वर्षदेखिनै यौन चाह आउन थाल्छ । मैले १०/१५ मिनेटदेखि दूध मोल्दै पछाडिबाट दलेकाले उसका पनि गाला राता हुन थालिसकेका थिए । उसले फ्रक खोली । भरखर उम्रन थालेका कैला रौ पुक्क परेको पूती । यो देखेर मलाई त कतिखेर छिराउँ भयो ।
उसलाई बेडमा उत्तानो पारें ।
“विस्तारो ल अंकल दुख्छ” मैले उसका तिघ्रा फैलाएर मेरो लाडो पसाउनै आँटेको थिएँ । उसले भनिहाली ।
“पहिले पनि यस्तो गरेकी थियौ र” मैले आफ्नो लाडोले उसको पूतीमा छुँवाउँदै सोधें । “अँ एक पटक सूरजसँग” उसले भनी ।
ओहो १४ वर्षकी केटी स्वाद लिन भ्याइसकेकी मनमनै मलाई लाग्यो ।
“को सूरज” मैले धक्का मार्दै सोधें ।
“मेरो स्कूलको सा…………थी…………।ऐया…॥दुख्यो क्या” एक पटक ढोका खुलिसकेको उसको कलिलो पूतीमा मेरो पहिलो धक्कामै लाडो स्वाट्टै पस्यो । म माथिबाट धमाधम धक्का दिन थालें ।
“अंकल…ऽऽऽऽपोल्योऽऽऽऽऽऽप्लिज…ऽऽऽऽऽझिक्नुन न हजूरको ॥ऽऽऽऽऽमरे…मम्मि हौ” उसको मुखबाट चित्कार निस्किइरहेको थियो ।
“पखन कब्बु एक छिन त हो नि …। म तिमीबाट पूरा आनन्द लिन्छु…एकछिन सही देउन”भन्दै मैले आफ्नो ओठ उसको मुखमा जोडेर उसको ओठ चुस्न थालेँ । उसको कलिलो छातीका दूध पनि माड्दै थिएँ । उत्त्जना झन झन बढ्दै थियो।
उसको मुखबाट “गूँङ,,,,गुङ” निस्कदै थियो । ऊ केही भनिरहेकी थिइ तर मेरो मुख उसको मुखैमा जोडिएको र म उस्को जीब्रो चुसिरहेकोले आवाज आइरहेको थिएन ।
२० मिनेट मच्चिएपछि मेरो लाडो स्खलित भयो। फच्याक्क…।फच्च…फच्चू । स्खलित भए